Ivato : tovolahy kely tsy ampy taona tratra nangalatra Mazda | NewsMada
Ivato : tovolahy kely tsy ampy taona tratra nangalatra Mazda
Tsy nampoizina! Ankizy tsy ampy taona mahavita mangalatra fiara teny Ivato. Manana fitaovana famahana sy famelomana fiara izy ireo. Soa ihany fa tsy nahay nitondra loatra ka izay nahasarona azy. Iray voasambotra, iray tafatsoaka teny Ivato.
Tovolahikely roa manodidina ny 17 taona eo, nangalatra fiara Mazda teny Ivato, omaly maraina. Ny olona ao am-piangonana izy roa lahy nanokatra ilay fiara nijanona teo amoron-dalana. Araka ny fanazavana, manana fanalahidy izy ireo nanokafana ny varavaran’ilay fiara. Namelona mihitsy ary nitondra ilay Mazda kanjo latsaka tanaty tatatra ilay fiara. Teo no nahasamborana ny iray, raha tafatsoaka ilay tovolahikely faharoa.
Tsy mbola nisy tahaka ity, tovolahikely mangalatra fiara, ary manana fitaovana entiny manatanteraka izany. Efa nandeha ilay fiara vao taitra ny tompony nanenjika sady nihorakoraka. Tsy lasa lavitra, moa niharan-doza ilay Mazda nentin’ireto ankizy tsy ampy taona.
Mandeha ny fanadihadiana azy ireo raha nisy olon-dehibe naniraka na nahim-pony irery ny nanao ity asa ratsy ity. Vao ny faran’ny herinandro teo mantsy ny nahatrarana ireo olon-dratsy mpangalatra fiara Sprinter sy Mazda. Nisy mpitandro filaminana mihitsy tamin’ireo jiolahy ireo. Izany hoe lasibatry ny mpangalatra ireo karazana fiara roa ireo. Tamin’ity indray mitoraka ity, ankizy indray manao ny asa ratsy. Mety noho ny tsy fahaizan’ireo ankizy mitondra ilay fiara, raha tsy izany, efa nanjavona ny fiaran’olona.
Miitatra ny saina
Amin’ny ankapobeny, vokatry ny fahantrana mahatonga ny firongatry ny asa ratsy. Tsy voalohany no nisy ankizy tsy ampy taona nangalatra fa maro ireo tratra mangaro-paosy, manendaka, ary anisan’ny lehibe indrindra ilay famonoan’olona teny Ambohitrarahaba farany teo. Tamin’ity kosa, tratra mangalatra fiara ny ankizy.
Miitatra ny sain’ireo ankizy na zatovo eto amintsika. Misy ny maniraka amin’ny ankapobeny, kanefa eo ihany koa ny fampianaran-dratsy azon’izy ireo amin’ny fiaraha-monina. Ny tranga voizina amin’ny haino aman-jery, sns. Tompon’andraikitra voalohany amin’ny zanany koa anefa ny ray aman-dreny andanin’izany. Fanaraha-maso ny ankizy, ny fanoroana, sns. Azo heverina fa mety iharan’ny sazy ihany koa ny ray aman-drenin’ireo ankizy tsy ampy taona manao asa ratsy.